Global Voices teny Malagasy » Ho Voatarika anatin’ny ‘Ozon’ny Trano Manaka-danitra ve i Sina? · Global Voices teny Malagasy » Print
Ho Voatarika anatin'ny ‘Ozon'ny Trano Manaka-danitra ve i Sina?
Voadika ny 01 Desambra 2018 16:11 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika miora
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Fampandrosoana, Fitantanam-pitondrana, Hevitra, Mediam-bahoaka, Toekarena sy Fandraharahàna
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Septambra 2012)
Tokony hihoatra an'i Etazonia i Sina amin'ny isan'ireo trano manaka-danitra. Araka ny voalazan'ny MotianCity, fikambanana mpanao fikarohana ao Sina, 470 ireo trano manaka-danitra ao Sina amin'izao fotoana, ny 332 amin'ireo an-dàlam-panamboarana ary ny 516 kosa mbola anaty vinavina. Amin'ny 2022, hahatratra 1.318 ny isan'ireo trano manaka-danitra ao Sina raha 563 kosa ny any Etazonia.
Ho fanampin'izay, ho resin'ny tilikambo mirefy 838 metatra amin'ny halavàna ao Changsha ilay tranobe avo indrindra (828 metatra) any Dubai rehefa tonga izany fotoana izany. Hahatratra maherin'ny 1.700 lavitrisa Yuan ny taotalim-bola miasa amin'ny fananganana trano manaka-danitra. Kanefa na misy aza ireo olompirenena Sinoa mankalaza ny fahavitan'ireo fananganana ireo, maro kosa no miasa saina amin'ilay ‘ozon'ny trano manaka-danitra’.
Araka ny tatitry ny Tondro momba ny Trano Manaka-danitra  naroson'i Andrew Lawrence tamin'ny Janoary 1999, matetika dia ny andro mialoha ny faharavan'ny toekarena no hitsanganan'ireo tranobe avo indrindra eran-tany ireo. Miakatra ambony be ny fampiasam-bola amin'ny trano manaka-danitra rehefa manomboka mitotongana ny toekarena.
Ity ambany ity misy adihevitra voafantina momba ny tatitry ny Southern Metropolis  [zh] (rohy maty) amin'ny tantaran'ireo trano manaka-danitra avy ao amin'ny fahana fanehoankevitry ny Sina Weibo  [zh]:
热狗方包: Tsy eritreretiko ho tsy azo tanterahina ny [fijery ho eny amin'ny fara-tampon'izao tontolo izao]. Afaka folo taona, Hihosona anaty fotaka ny toekaren'i Sina.
美容瘦身研究会：Tsy kolontsain'ny firobarobana fotsiny ihany izao. Raha tsy misy ny fanovàna ny pôlitikantsika, ho voaozona tsy hahomby ny firenena. Rehefa rodana ny fanondranana; mihena ny fanjifàna, miharatsy kokoa ny elanelana misy eo amin'ny mahantra sy ny manana, hitombo ny kolikoly sy ny fahafatesana antoka eo amin'ny fampiasam-bolam-panjakàna. Rehefa nirodana ny Firaisambe Sôvietika, 70% tamin'ny Harin-karena Faobe ny fampiasam-bolam-panjakàna.
你的六等星：Mafonja kokoa ny tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana vola 1.700 lavitrisa raha nolaniana tamin'ny fampianarana sy ny fahasalamam-bahoaka fa tsy tamin'ny trano manaka-danitra. Maninona no tsy manao izany ny governemanta?
矿工菅井利羽：Adala. Mametraka toerana ahafahan'ireo mpampihorohoro manafika antsika ve isika miaraka amin'ireo trano manaka-danitra marobe ireo. Tsy mahita ny trano manaka-danitra ho manintona ireo firenena mandroso rehetra ao Eoropa, Amerika ary Japana. Ireo firenena vao nanan-karena ihany, tahaka an'i Dubai sy i Sina, no mirobaroba amin'ny fananganana tilikambo tahaka izao.
D9只耗子：Fambaran'ny fitotonganan'ny toekarena atsy ho atsy ny firobarobana amin'ny trano manaka-danitra.
在田人：Toy ny taovan'olombelona ny tanàna. Ny Fahasalamana no lehibe indrindra. Miankina amin'ny fiasany sy ny fahafahany manohitra ny loza ary ny asan'ny olompireneny sy ny fomba fihetsiny, ny fahasalaman'ny tanàna. Sarontava marefo mora simban'ny oram-baratra na ny afo goavana na koa ny areti-mifindra ny toetsaina mirobaroba ananan'ity tanàna ity. Iza no faly amin'io hazakazaka trano manaka-danitra io? Ho faly amin'izany ve ny olom-pirenena tsotra?
裸奔—蜗牛：Sosokevitra vitsivitsy: 1. mametrà fandanjana eo anoloan'ny fidirana; 2. tokony hanara-maso ny rivotra sy ny orana ary ny fihetsiky ny vorona ny mpiandraikitra ny famantarana ny toetrandro, sao sanatria misy vorona matoritory mifotetaka amin'ny rindrin'ireo tranobe ka mitondra loza. 3. tokony hanome karama avo roa heny ho an'ny mpiambina varavarana sy ireo mpiasa mpikirakira ireo fitaovana fampiakarana, asa mampidi-doza avokoa ireo ary mety voatery hitaty ny fahadisoana rehetra ry zareo rehefa tonga ny loza.
飞上蓝天390：arakaraka ny haavon'ny trano manaka-danitra ny fahantran'ny vahoaka, ary miankina amin'izay koa ny hafainganan'ny fianjeràny.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/12/01/129731/
 Tondro momba ny Trano Manaka-danitra: http://en.wikipedia.org/wiki/Skyscraper_Index
 tatitry ny Southern Metropolis: http://gcontent.oeeee.com/9/f0/9f0b7340a787526d/Blog/6f0/efdb06.html?bsh_bid=137448473
 fahana fanehoankevitry ny Sina Weibo: http://e.weibo.com/1644489953/yDldxEDOl?ref